Izinkinga zesifo sikashukela sohlobo 1 > Izinhlobo Nezinhlobo
Amamitha kashukela egazi
Isifo sikashukela kubantu besifazane
Uhlobo 1 isifo sikashukela: izimbangela, izimpawu nokwelashwa, izinkinga
Noma ngabe yisiphi isimo esandayo somuntu onesifo sikashukela, kunesizathu sako. Sekuyiminyaka eminingi odokotela bekhuluma ngezinto ezibangela izinkinga, kepha kuze kube manje abakwazanga ukuthola ngokuphelele ukuthi zinjani lezi zigameko.
Ngasikhathi sinye, izimo eziningana ziyaziwa ezivumela ukubukeka kwezinguquko ezingalungile zomzimba. Ezivame kakhulu zibhalwe ngezansi:
ukungondleki okungalungile, okubangela ukuphazamiseka kwe-metabolic,
ushukela omningi kanye / noma i-sodium,
sikhuphuke ushukela wegazi,
ukunqwabelana kwe-lactic acid emzimbeni.
Izimbangela eziyisisekelo zesifo sikashukela sohlobo 1 zingukuvezwa kofuzo. Kuyaphawuleka ukuthi amathuba okuqanjwa kokugula kwengane ayohluka kancane kuye ngokuthi yiliphi ilungu lomndeni elinesifo esifanayo. Isibonelo:
ngomama ogulayo, amathuba awekho ngaphezu kwe-2%,
uma isifo sitholakala kubaba, khona-ke amathuba ahluka kusuka ku-3 kuye ku-6%,
ukuba khona kwe-pathology efana nohlobo 1 sikashukela ezinganeni zonyusa amathuba wamaphesenti ayisithupha noma ngaphezulu.
Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa kanye nokuxilongwa kwe-hyperinsulinism ezinganeni nakubantu abadala
Izinkinga ezinganeni zivezwa ngezinga elincane, uma kuphela kungenxa “encane” yolwazi. Ukushona ngaphansi kweminyaka eyi-18 kusondele ku-zero. Noma kunjalo, uma ingane itholakala ukuthi inesifo sikashukela, lokhu kusho ukuthi inqubo yokubulala imali isivele isiqalile. Odokotela baphawula izinkinga eziningi zesifo sikashukela ebusheni / ebusheni:
i-angiopathy (ezimweni ezingavamile),
Izinkinga zesifo sikashukela zisencane ziyingozi ngenxa yemfihlo yazo. Izimpawu ezibonakaliswa enganeni zivame ukubangelwa ezinye izifo, isifo kanye nezifo ezivamile. Ukunikeza ukufinyelela okufika ngesikhathi ekunakekelweni kwezokwelashwa okuqeqeshiwe, kungenzeka ukufeza isinxephezelo esiphelele sesifo sikashukela ngesikhathi esifushane futhi uqinisekise ukuqedwa ngokuphelele kwezinto ezikhathazayo.
Izimpawu sd uhlobo II
Izimpawu (ukoma, i-polyuria, ukulunywa,
ukuthambekela kwezifo) kusesilinganisweni
noma ulahlekile. Imvamisa yokukhuluphala
Ngaphandle kwenkambo yayo engapheli, lesi sifo, ngaphansi kwethonya lezinto ezingezinhle, sibonakaliswa ngokuthuthuka okusheshayo kanye nokushintsha kusuka kwesinye isigaba sobubi kuye kwesinye.
Izimpawu ezivelela kunazo zonke zohlobo lwe-1 yesifo sikashukela ziveziwe:
ukoma okungapheli - lokhu kuholela ekutheni umuntu akwazi ukuphuza amalitha ayishumi uketshezi ngosuku,
umlomo owomile - uvezwe ngisho nangasemuva kohlobo lokuphuza oluningi,
ukuchama okuningana kaningi,
ukwanda kwesifiso sokudla
isikhumba esomile nolwelwesi lwe-mucous,
ukulunywa kwesikhumba okungenasizathu kanye nezilonda ezihlanzekile zesikhumba,
ubuthakathaka kanye nokusebenza okunciphisile
imingcele yemikhawulo ephansi,
isicanucanu nokuhlanza, okuletha impumuzo okwesikhashana,
ukulala embhedeni - lolu phawu luvame kakhulu ezinganeni.
Isifo sikashukela yisifo esijwayelekile ezweni lanamuhla. Lesi sifo asigcini ngokushintsha impilo yomuntu, kepha futhi sifaka ezinye izinkinga.
Isifo sikashukela i-mellitus singumphumela wokungasebenzi kahle ohlelweni lwe-endocrine kanye nenani le-insulin ekhiqizwayo. Uma inani le-insulin alanele ukwephulwa kwe-glucose, khona-ke lolu hlobo lwesifo lubizwa ngokuthi uhlobo lwesifo sikashukela. Ukwedlula i-insulin engakwazi ukuxhumana nama-receptor athile kukhombisa ukuba khona kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Uhlobo 1 sikashukela luvame kakhulu kubantu abasha nasezinganeni. Uhlobo lwesibili sikashukela luvame ukutholakala kubantu asebekhulile. Ngokuxilongwa okufika ngesikhathi, ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungagwenywa ngomuthi nokudla.
Ividiyo mayelana nokwelashwa nokuvinjwa kwezinkinga zesifo sikashukela
Ngemuva kokuqinisekisa ukutholakala kwezifo, iziguli eziningi zinentshisekelo kulo mbuzo - kungenzeka yini ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 1? Ayilapheki ngokuphelele, kodwa kungenzeka ukuthuthukisa isimo sesiguli iminyaka eminingi ngosizo lwezindlela ezinjalo zokwelapha:
ukwelashwa kokufakwa esikhundleni kwe-insulin - umthamo wento enjalo ukhethwa ngokuhlukile ngokuya kobunzima besifundo kanye nesigaba sesiguli,
irejimeni eyenzelwe ngokukhethekile ukusebenza komzimba - ngokuvamile, iziguli zikhonjiswa zenza umzimba okhanyayo noma olinganiselayo wokuzivocavoca nsuku zonke okungenani ihora.
Ukudla kwesifo sikashukela sohlobo 1 kusho ukuhambisana nale mithetho elandelayo:
ukungafakwa ngokuphelele kwemikhiqizo efana noshukela noju, ukulondolozwa okwenziwe ekhaya kanye nanoma iyiphi i-confectionery, neziphuzo zekhabhoni,
cebisa imenyu enconywe yisinkwa nezinhlamvu, amazambane nezithelo ezintsha,
Imikhawulo yokudliwa kwamafutha emvelaphi yezilwane,
ukulawula ukusetshenziswa kwezilimo nemikhiqizo yobisi,
ngaphandle kokudla ngokweqile.
Uhlu oluphelele lwezithako ezivunyelwe nezenqatshelwe, kanye nezinye izincomo eziphathelene nokudla okunempilo, lunikezwa kuphela udokotela ohambelayo.
Umphumela omkhulu ongemuhle emzimbeni ngohlobo 1 sikashukela utholakala ngenxa yezinga eliphakeme le-glucose egazini.
Umzimba awukwazi ukuwuhlobanisa ngokujwayelekile ube namandla bese uqala inqubo yokuhlukanisa amafutha, okuthi nawo, wehle kuwo ama-ketones futhi uqongelele cishe kuzo zonke izitho ngisho nemithambo yegazi. Lezi izinto eziyingozi, ezibandakanya, ngokwesibonelo, i-acetone.
Kaningi, ngokubhekene nesizinda sokuphazamiseka okunjalo kwe-metabolic, isiguli esinohlobo lwe-1 yesifo sikashukela sikhula i-ketoacidosis, isifo lapho imikhiqizo ye-metabolic iqoqana ngokweqile emzimbeni, kepha ayinakugxila ngokuphelele.
Ngokukhula kwalesi sifo kowesifazane okhulelwe, izingqinamba zizoba - ukuphuphuma kwesisu okungaqondile kanye nokungalungi kahle kwengane.
Isifo sikashukela i-mellitus sibhekwa njengesinye sezifo eziyinkimbinkimbi. Ngaphezu kwalokho, akusona lesi sifo uqobo esidala ukukhathazeka, kodwa izinkinga zesifo sikashukela i-mellitus. Ukuthuthukiswa kwezinkinga kungekudala kukhubazeka, isikhathi eside nesinzima esiholela ekukhubazekeni, kanye nokwehliswa okungathandeki kakhulu empilweni.
Isizathu esikhulu sazo zonke izinkinga zesifo sikashukela ukwanda kwamazinga kashukela emzimbeni. I-hyperglycemia engalawulwa, ukuthuthukisa ukuphazamiseka kwemetabolism emzimbeni kubangela ukwanda kwe-pathology. Ngaphezu kwalokho, izinga eliphakeme le-insulin egazini liyinto elimazayo engxenyeni emincane yemithambo yegazi.
Njengoba kukhuphuka njalo ushukela egazini, amangqamuzana omzimba angaphansi kwesivunguvungu esinoshukela esinamandla, okuholela ezinkingeni ezinkulu zesifo sikashukela.
Lolu hlobo lwesifo lubalwa yizinkinga ezinzima ezithuthuka ngokoqobo emehlweni. Ezinye zalezi zimo zokugula zidinga ukwelashwa okuphuthumayo futhi zilungile ngokugwema. Cabanga ukuthi yiziphi izinkinga zohlobo 1:
I-Ketoacidosis ukutholwa kwezidumbu ze-ketone esegazini ngaphansi kwezimo lapho i-insulin ingahlinzeki kakhulu. Ngenkathi kugcinwe ukushoda kwe-hormone, isiguli siwela i-ketoacidotic coma ngokushesha.
Imbangela ye-hyperosmolar coma ukukhuphuka koshukela, yingakho umzimba uphela amanzi emzimbeni. Uma isiguli singalashwa ngalesi sikhathi, khona-ke ingozi yokufa iphezulu.
I-Hypoglycemic coma kuthiwa yilapho, ngephutha, isiguli sithola khona umthamo we-insulin omningi kakhulu. Ngenxa yalokhu, ukushoda kwe-glucose kwakhiwa ebuchosheni, okuholela ekusebenzeni okungenampilo, okuholela ekuqapheleni okungaphelelanga, ukufikelwa umdlandla kanye nokukhohlisa.
Izinkinga zesifo sikashukela i-mellitus, ngenxa yobucayi baso, ziyingozi kakhulu ezinganeni, ngoba imizimba yazo ibuthakathaka kakhulu ukuba nezinqubo ezanele zokuncephezela, futhi noma ikuphi ukubukwa okuchaziwe kungabulala.
Ngaphezu kwemiphumela emibi, uhlobo 1 luphawulwa ngezinkinga "ezifike sekwephuzile". Zihlala zinjalo ngokwemvelo futhi zifana nokubonakaliswa kwesifo sohlobo 2.
Okuwukuphela kwendlela yokuvimbela ngempumelelo izinkinga zesifo sikashukela ukunamathela ngokuqinile ezincomeni zokwelashwa, kanye nokuqapha njalo amazinga kashukela wegazi nokuyigcina isezingeni “eliphilile”.
Akunakwenzeka ukuthi uvikele ngokuphelele imiphumela emibi yesifo ngale ndlela, kodwa kungenzeka ukuthi unciphise.
Kuze kube manje, ukuvimbela okuqondile kwesifo sikashukela sohlobo 1 akukakhiwa. Ukwehlisa amathuba okuthola ukugula, kuyanconywa:
yeka ngokuphelele imikhuba emibi,
thatha umuthi kuphela ngokuyalelwa udokotela,
gwema ukucindezela noma nini lapho kungenzeka
gcina isisindo somzimba ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile,
ukuhlela ngokucophelela ukukhulelwa
phatha ngesikhathi noma yikuphi ukugula okuthelelekayo noma okubangelwa yigciwane,
ukuhlolwa njalo ngudokotela we-endocrinologist.
I-prognosis, kanye nokuthi baphila kangakanani nesifo sikashukela sohlobo loku-1, kuya ngokuqondile ukuthi isiguli sizithobela ngokucophelela kangakanani zonke izincomo zokwelapha ze-endocrinologist. Izinkinga zingabulala.
Thayipha isifo sikashukela 1 - siyini lesi sifo?
Uhlobo 1 sikashukela i-mellitus (noma isifo sikashukela esincike ku-insulin) yisifo se-endocrine esibonakala ngokukhiqizwa okunganele kwe-insulin ye-hormone ngamanyikwe. Ngenxa yalokho, umuntu unesilinganiso esandayo sikashukela ku-plasma yegazi nezimpawu eziphambili ezihambisana naso - ukoma okungapheli, ukunciphisa umzimba okungenasisekelo.
Lesi sifo aselapheki, ngakho-ke, ekutholeni isifo sikashukela, iziguli kufanele zisebenzise imishanguzo esehlisa amazinga kashukela wegazi impilo futhi ziqaphe isimo sazo ngokucophelela.
Isikhathi sokuphila sohlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, ngokuphathwa okufanele kanye nokuqaliswa kwezincomo zikadokotela, kuphezulu impela - iminyaka engaphezu kwe-30-35.
Izimbangela Zesifo Sikashukela soHlobo 1
Izimbangela ngqo zalesi sifo azikasungulwa. Kukholelwa ukuthi isici esisongela phambili sesifo sikashukela esincike ku-insulin yisiphetho sofuzo.
Ngokwengeziwe kwifa, ezinye izinto zingaholela ekukhuleni kwesifo:
Ukukhuluphala ngokweqile noma ngokweqile,
Ukuphazamiseka kokudla - ukusetshenziswa njalo kwe-muffin, ushokoledi, ama-carbohydrate alula, ngenxa yalokho kuphazamiseka kwe-carbohydrate kanye nama-metabolism emzimbeni womuntu, okubuye kuvuse ukungasebenzi kahle kwamanyikwe,
I-pancreatitis engapheli noma i-pancreatic necrosis,
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezilimaza amaseli we-pancreatic abhekene nokukhiqizwa kwe-hormone insulin (okubizwa ngokuthi islets of Langerhans),
Izifo ezithathelwanayo zesikhathi esidlule nokungasebenzi kahle kwe-gland yegilo.
Izimpawu zesifo sikashukela soHlobo 1
Izimpawu zesifo sikashukela sohlobo 1, isithombe 1
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela sohlobo 1 yilezi:
Ukwehla kwesisindo okusheshayo
Ukuchama okwengeziwe (i-polyuria),
I-Lethargy, ukukhathala, ukozela,
Indlala, ehamba ne-pallor yesikhumba, i-tachycardia, ukubonakala kwesithukuthezi esibandayo, ukuncipha kwengcindezi yegazi,
Ukuthinta umuzwa kutholakale kalula nobuthakathaka bemisipha.
Kwabesifazane, enye yezimpawu zokuqala zesifo sikashukela ukulunywa kanzima kwesitho sangasese sangasese se-perineum nezangaphandle, okubangelwa ukuba khona kwamakristali kashukela emchameni.
Ngemuva kokuvakashela indlu yangasese, amaconsi omchamo ahlala esikhumbeni nolwelwesi lwama-mucous, obangela ukucasuka okukhulu kanye nokusikeka okungabekezeleleki, okuphoqa abesifazane ukuthi babonane nodokotela.
Emadodeni, ukubonakaliswa kokuqala kokhombisa kohlobo lwesifo sikashukela kungukungasebenzi kahle kwezocansi (i-erectile dysfunction) kanye nokuntuleka kwesifiso sobulili.
Lesi sifo singenzeka kamuva nje isikhashana noma isiguli simane singafaki ukubaluleka kwesithombe esikhulayo somtholampilo.
Ukuqapha futhi ube yisizathu sokuhambela ngokushesha kudokotela kufanele kube ukuklanywa okungelapheki kanye namanxeba amancane ebusweni besikhumba, ukwakheka kwamathumba namathumba, kanye nokuwohloka okubukhali kokungazinzi komzimba, umkhuhlane ovamile kanye nokushayeka okuvamile.
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 1
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela esincike ku-insulin ngokuvamile akunzima, uma usola isifo, isiguli sinqunywe ukuthi siyohlola igazi ukuthola ukuthi ushukela uphelele kangakanani.
Ukuze imiphumela yocwaningo ithembeke, igazi kufanele lithathwe ngokuqinile esiswini esingenalutho, futhi amahora angama-8 ngaphambi kwenqubo, isiguli akufanele sidle amaswidi, sidle ukudla, siphuze ikhofi, sibheme noma sisebenzise imishanguzo.
Inkomba efanelekile kashukela wegazi ngu-3-3,5 mmol / l, kwabesifazane abakhulelwe lezi zinkomba zingafinyelela ku-4-5 mmol / l, okungeyona indlela yokugula. Esikhathini sikashukela, izinga likashukela egazini esiswini esingenalutho lizolingana no-7.0-7.8 mmol / L.
Ukuqinisekisa ukunemba kokuxilongwa, isiguli sibhekana nokuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose: okokuqala, igazi lithathwa esiswini esingenalutho, khona-ke isiguli sinikezwa isixazululo se-glucose futhi siphuze ukuphinde kubuye kuhlaziywe ngemuva kwamahora ama-2. Uma umphumela ngemuva kwamahora we-2 ungaphezu kwe-9.0-11.0 mmol / l, khona-ke lokhu kukhombisa uhlobo 1 sikashukela.
Indlela efundisayo yokuthola lesi sifo ukuvivinya i-glycated hemoglobin A1C, ekuvumela ukuthi uxilongeke ngokunembile futhi akudingi ukulungiswa isikhathi eside kwesiguli.
Thayipha isifo sikashukela sokuqala
Lapho eqinisekisa ukutholakala kwesifo sikashukela esincike ku-insulin, udokotela ubhalela isiguli inqubo yokwelashwa yomuntu ngamunye - lezi izidakamizwa ezokwehlisa izinga likashukela egazini, isiguli okufanele silithathe impilo yonke.
Umthamo womuthi ungashintshwa ngokuya ngezimpawu zomzimba wesiguli, inkambo yesifo, ukusetshenziswa okufanayo kwezinye izidakamizwa, ukuba khona kwezinkinga.
Esigabeni sokuqala sokwelashwa, isiguli sinqunywe amalungiselelo e-insulin ngefomu lethebhulethi, noma kunjalo, uma umphumela unganele noma ubuthakathaka, futhi isifo sikashukela siyaqhubeka, khona-ke baphendukela kumijovo ye-insulin.
Umthamo we-hormone ubalwa ngokuhlukile ngawodwana, kufanele uphathiswe isiguli ngendlela engafani (endaweni ehlombe, ithanga elingaphandle, udonga lwangaphambi kwesisu).
Indawo yomjovo kufanele iguqulwe njalo, ngoba lapho ijova i-insulin endaweni eyodwa nendawo efanayo, isiguli sikhula ngokushesha i-lipodystrophy.
Ngokuya ngekhono nenani lokukhiqizwa kwe-insulin yizincithakalo zeLangerhans, isiguli sinqunyelwe izidakamizwa zesizinda (udinga ukufaka kaningana ngosuku) noma isenzo esijwayelekile (umjovo owodwa ngosuku nje unanele).
Isiguli ngasinye esinohlobo lokuthola isifo sikashukela sokuqala kufanele sibe ne-glucometer ekhethekile naye - insimbi ephaketheni ezokala ngokushesha ushukela wegazi.
I-Insulin Pump Photo 3
Ezigulini ezingena pancreas empeleni ezingasebenzi futhi ezingakhiqizi i-hormone insulin, kufakwa iphampu ye-insulin.
Impompo yithuluzi elincane lapho isiguli sinikezwa khona njalo nge-insulin kumthamo owanqunyelwa kushubhu elikhethekile ngenalithi.Inaliti ifakwa odongeni lwesibeletho olungaphandle bese ithathelwa indawo njalo ezinsukwini ezimbalwa.
Inzuzo yale ndlela yokwelashwa ukuqedwa kwesidingo sokuhlala sifaka i-insulin nokulawulwa okungcono kwalesi sifo, kepha ukubuyiselwa kwephampu kuyizindleko zayo eziphakeme, ngenxa yalokho, akubona bonke abanesifo sikashukela abangakwazi ukusifaka.
Izinkinga zesifo sikashukela sohlobo 1
I-mellitus yesifo sikashukela esincike ku-insulin iqinisekile ukuthi lesi sifo siyaqhubeka ngokushesha futhi isimo sesiguli sinokuwohloka ngokushesha.
Ngokutholwa okungafanele kwe-pathology kanye nezinguquko ezingazelelwe ezingeni le-glucose esegazini legazi, isiguli singaba nezinkinga:
I-angiopathy yesifo sikashukela - imithambo yegazi yamehlo, imilenze, inhliziyo, izinso nezinye izitho ezibalulekile ziyathinteka, ngenxa yalokho umsebenzi wazo uphazamiseka.
Ukunikezwa kwegazi okunganele kanye nokudla komsipha wenhliziyo, ukushaya kwenhliziyo,
IGangrene - iba ngumphumela wokubonakala kwesikhumba samanxeba amancane nezilonda ezingapholi futhi ezingagcwala njalo,
Unyawo lwesifo sikashukela - eshintsha ukwakheka konyawo, anciphise ukuzwela kwesikhumba, izilonda zokukhunta kanye nokwakhiwa kokuqhekeka okuncane,
I-complication eyingozi kakhulu yohlobo lweshukela sikashukela:
I-Hypoglycemic - ngenxa yokweqisa kwe-insulin,
I-Ketoacidotic - ebangelwa ushukela omkhulu wegazi kanye nokuqongelela kwemizimba ye-ketone.
Zombili lezi zimo zibeka engcupheni impilo yesiguli, futhi uma kungekho ukunakekelwa okufika ngesikhathi okuholela ekufeni.
Ukuthi bangaki abantu abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 baphila kuncike kakhulu esithombeni somtholampilo walesi sifo kanye namandla okulawula amazinga kashukela egazi.
Lapho ugcwalisa zonke izincomo zezokwelapha, ukulandela ukudla nokugcina indlela yokuphila enempilo, iziguli ziphila kuze kube ukuguga ngaphandle kwezinkinga.
Ukudla Kwesifo Sikashukela soHlobo 1
Ngokungeziwe ekwelashweni kwezidakamizwa, isiguli kumele ngaso sonke isikhathi silandele ukudla okunomkhawulo obukhali enanini lama-carbohydrate namafutha (amazambane, amafutha ezilwane, amaswidi, ushokoledi, ikofi, ubhontshisi, amakhekhe kanye namakhekhe, ushizi we-cottage fat, iziphuzo ezinotshwala, i-pasika, isinkwa esisha esimhlophe).
Isisekelo sokudla kukhona okusanhlamvu, amabele, izithelo nemifino, inyama enamafutha amancane, imikhiqizo yobisi.
Thayipha isifo sikashukela sokuqala esingu-1 mellitus ICD 10
Ezingeni eliphezulu lomhlaba wonke lezifo Uhlobo 1 lwesifo sikashukela:
I-IV IV - Izifo zohlelo lwe-endocrine, izinkinga zokudla nezinkinga ze-metabolic (E00 - E90)
Isifo sikashukela mellitus (E10-E14)
I-mellitus yesifo sikashukela esincike ku-E10.
Lokhu okulandelayo kukhishwe kule ndima: isifo sikashukela i-mellitus esihambisana nokungondleki (i-E12.-), izingane ezisanda kuzalwa (P70.2), ngesikhathi sokukhulelwa, ngesikhathi sokubeletha kanye nesikhathi sokubeletha (O24.-), glycosuria: NOS (R81), renal (E74.8), okhubazekile ukubekezelela i-glucose (R73.0), i-postoperative hypoinsulinemia (E89.1)
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-hydrogen peroxide ye-nonmyvakin
Amanothi wesifo sikashukela: ukubuyekezwa kodokotela, inani, ukufana kwamaphilisi wesifo sikashukela
Yikuphi okungcono - i-thioctacid noma i-Berlition
Ngingakwazi ukudla izinsuku zesifo sikashukela? Ukudla okhethekile, ukondleka okufanele, kuvunyelwe futhi kuvinjelwe imikhiqizo sikashukela
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis obliterans yemikhawulo ephansi
Yini engcono: Goldline noma Reduxin?
Uyini umehluko phakathi kweReduxin neGoldline? Uma ungeke wehlise isisindo ngokwakho, ungasebenzisa imishanguzo ekhethekile. Odokotela abaningi beluleka iziguli zabo ukuthi zisebenzise i-sibutramine ezimweni ezinjalo. ...
Utamatisi wesifo sikashukela: kungenzeka ukuthi udle utamatisi wabanesifo sikashukela
Izimpawu zesifo se-pancreas kanye ne-gall bladder nezidakamizwa zokwelashwa
Isifo sikashukelaUkuxilongaUkulawulwa kwesifo sikashukelaIzindabaIsifo sikashukela nezinsoIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileImithiIsifo Sikashukela NemidlaloIngcindeziIzindlela
Yiziphi izifo ukuthi isibindi sikhiqiza i-cholesterol eningi
Isifo sikashukela, 2018
I-Psychology yesifo sikashukela: ubunzima bezengqondo
Inkomba ye-glycemic yetafula lezinhlamvu
Ukudla ushukela wegazi ophezulu
Ikhekhe le-carrot elibunjiwe
Ama-analogues wesidakamizwa i-linagliptin * (linagliptin *)